अल्फा मस्तिष्क समीक्षा - के यसले काम गर्दछ!
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » तार समाचार सेवाहरू » अल्फा मस्तिष्क समीक्षा - के यसले काम गर्दछ!
मेरो २० को उमेरमा कसैको रूपमा, मैले व्यावसायिक र व्यक्तिगत रूपमा धेरै प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
दिनमा, म एक दंत चिकित्सक हुँ। रातमा, म मेरो मास्टरको स्तरको लागि अध्ययन गर्दै एक पूर्ण समय विद्यार्थी हुँ।
चुनौती यो छ कि अब PPM गोल घुमाउछ, मेरो दिमाग धुमिलो छ र म ध्यान दिन सक्दिन। दिउँसो मार्फत पनि, म भावनात्मक रूपमा थकित महसुस गर्छु।
मलाई केहि चाहिएको थियो जसले मलाई विनाश नगरी भावनात्मक कार्यक्षमता सुधार गर्दछ।
अल्फा ब्रेन अर्डर गर्न यहाँ आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
त्यो मैले अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स र अल्फा ब्रेनको बारेमा थाहा पाए पछि।
के तपाईलाई सुधारिएको ध्यान, गहिरो ध्यान, र विस्तारित मेमोरीको आवश्यकता पर्दछ कि कुनै जिटरहरू र क्र्यासहरू छैनन् जुन क्याफिनमा संलग्न छ? तल इमान्दार अल्फा ब्रेन निरीक्षण छ, कसरी यसले कार्य गर्दछ, पेशेवर विपत्ति र विकल्पहरू। सुरु गरौं!
अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स के हो?
अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स के हो भनेर तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ - मैले उनीहरूसँग मेरो परिचय हुनु अघि मैले तिनीहरूको कुरा सुनेको थिइनँ। संक्षिप्तमा, अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स कार्बनिक वा सिंथेटिक रसायन हो जुन स्वस्थ व्यक्तिहरूमा मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउन सक्छ। यी बृद्धिकर्ताहरू शताब्दीयौंसम्म चिनियाँ औषधि र औषधीय चिकित्सामा प्रयोग गरिन्छ। कहिले काहिँ अनुभूति बढाउने वा मेमोरी बृद्धि गर्ने सामग्री भनेर चिनिन्छ, अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्सले वर्तमान अत्यधिक प्रतिस्पर्धी समाजमा प्रख्यातता प्राप्त गरेको छ। हालसालै, मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन उत्पादनहरूको लागि बजार बढेको छ।
अर्गानिक अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्समा प्राकृतिक जडिबुटीहरू जस्तै जडिबुटी र बोटका अर्कहरू हुन्छन् जुन उनीहरूको अनुभूति वृद्धि गर्न क्षमताको लागि मूल्या .्कन गरिएको थियो। कृत्रिम व्यक्तिहरू दलालहरू हुन् जसले मनोवैज्ञानिक कार्यहरूमा शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्छ। अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स स्मृति, ध्यान, रचनात्मकता, बौद्धिकता र प्रेरणाको सम्बन्धमा एक सीमा चाहने पुरुष र महिलाहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। तपाईंले कृत्रिम वा प्राकृतिक अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स छनौट गर्नुहोला वास्तवमा तपाईंको उद्देश्यहरूमा निर्भर गर्दछ। Nootropic जैविक र गैर-बानी गठन गठन हुनु पर्छ।
हेर्नै पर्छ: (औपचारिक सौदा) यसको आधिकारिक अनलाइन स्टोरबाट अल्फा ब्रेन अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्सले कसरी काम गर्दछ?
सुरु गर्नका लागि, हामीले वास्तवमै थाहा पाउनु पर्छ मस्तिष्कले कसरी काम गर्दछ ताकि अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्सले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्ने। प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स मस्तिष्कको क्षेत्र हो जुन धेरै कार्यकारी कार्यहरूको लागि जिम्मेवार हुन्छ। धेरै धेरै केहि गर्न, हाम्रो दिमागले न्युरोट्रान्समिटर रिलीजको माग गर्दछ; अझ विशेष गरी तिनीहरू एक विशेष बिजुली क्षमताको चाहना गर्दछन् स्नायु ब्रेकिंग प्रेरणाको उत्तेजना जगाउन। न्यूरोट्रान्समिटरहरू अरु केहि पनि हुने बनाउन रिसेप्टर्सबाट उठ्नु पर्छ।
हो, यो एक प्रकारको ध्वनि जटिल छ। साँच्चै, तपाईले बुझ्न चाहानु भएको सबै अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्सले हामीलाई मस्तिष्क क्षमता प्रदान गर्दछ जसले हामीलाई सार्न, जान, कडा र चाँडो सार्न अनुमति दिन्छ। त्यो कुरा गर्दा, यी सामानहरू संज्ञानात्मक गतिविधिहरूका लागि मात्र लाभदायक छैनन्। तिनीहरू व्यायामका लागि पनि उत्कृष्ट छन्। तिनीहरूले थकान कम गर्दछ र कोर्टिसोलमा कुनै वृद्धि कम गर्दछ। यो तपाईं पातलो मांसपेशिहरु को लक्ष्य संग, अधिक र अधिक शक्तिशाली कसरत अनुसरण गर्दछ। मलाई ठूलो लाग्यो!
सबै कुराको बारेमा जिज्ञासु अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्सले तपाईको लागि गर्न सक्छन्? Alpha Brain को मेरो अवलोकन पाउनका लागि पढिरहनुहोस्।
मेरो इमान्दार अल्फा मस्तिष्क समीक्षा
अल्फा ब्रेन ओन्निट द्वारा बनाईएको हो, औब्रे मार्कसमा आधारित पूरक फर्म। Onnit स्वास्थ्य स्वास्थ्य पोषण पूरक र अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स देखि समग्र स्वास्थ्य र कल्याण समाधानहरु को लागी सबै बेच्छ।
पनि हेर्नुहोस्: (बाह्य प्रस्ताव) सबैभन्दा कम मूल्य अनलाइन को लागी अल्फा ब्रेन अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
अल्फा ब्रेन समीक्षा पहिलो हेराई
यदि तपाइँ तपाइँको दिमागले कार्य गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले दुईवटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ: यसलाई बढी अल्फा तरंगहरू कमाउनको लागि, र हर्मोनहरूको सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्ने। अल्फा ब्रेन यी दुवै उद्देश्यहरू दिमागमा राखी सिर्जना गरिएको हो।
- मेमोरी भूमिका लाई बढावा दिन्छ
- ध्यान केन्द्रित गर्दछ हडप्ट ड्राइभ, मुड, र चीजहरू सम्पन्न गर्न प्रेरणालाई बढाउँदछ
- शाकाहारीका लागि स्वीकार्य क्याप्सूलहरू
- एल-टायरोसिन चिन्ताको समयमा शिखर मानसिक प्रदर्शन कायम राख्न मद्दत गर्दछ
- संचालन गर्न क्लिनिकल अध्ययनद्वारा प्रमाणित
- from वटा अधिवक्ता नूट्रोपिक कम्पोनेन्टहरुबाट २ समावेश गर्दछ
- लामो अवधि को उपयोग संग कुनै सुरक्षा मुद्दाहरु छैनन्
- यो महँगो छ
- प्रयोग गरिएको कम्पोनेन्टहरूमध्ये धेरै निम्न-dosed छन्
- अनुभूति को लागी केहि असफल सामग्री सामिल छ
- स्वामित्व मिश्रण समावेश गर्दछ
दिमागको कुहाइ कम गर्न र ध्यान बढाउन डिजाइन गरिएको अल्फा ब्रेन १० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्समा बजार नेता बनेको छ। मैले वास्तवमै जो रोोगन विशेषज्ञ पोडकास्टको बारेमा अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्सको बारेमा सुनेका थिए, जहाँ उनले यस वस्तुको बारेमा सत्य बोले। केही अनुसन्धान पछि, मैले पत्ता लगाए कि अल्फा ब्रेनमा क्षमता छ जुन तपाईंलाई दबाबमा स्पष्ट रूपमा सोच्न, नाम र क्षेत्रहरू सम्झन, र कठिन कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ।
हुनसक्छ अल्फा ब्रेनको बारेमा सब भन्दा राम्रो चीज यो सरल तथ्य हो जुन व्यायाम गर्दा अधिक क्यालोरीहरू जलाउन सम्भव तुल्याउँछ, र अधिक छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ। यदि तपाईं एक जिम उत्साही हुनुहुन्छ वा जो कोही राम्रो आकारमा जान चाहान्छन्, तब अल्फा ब्रेन प्रयास गर्न को लागी एक शानदार उत्पादन जस्तो लाग्यो। ती चीजहरू मध्येमा म चिन्तित थिए क्र्यास हुने सम्भावना थियो। मेरो व्यस्त तालिकाको साथ जुन कहिलेकाँही १ 15-घण्टा दिनहरू भरिन्छ, त्यहाँ म खराब गर्न सक्ने कुनै तरिका छैन!
मैले पढेको कि अल्फा ब्रेन बोक्नु भनेको तपाईको दिमागमा अर्को उपकरण साकार गर्न मिल्दोजुल्दो छ। र यो सत्य हो - यसले तपाईंलाई तपाईंको असिमित सम्भावना बुझ्न मद्दत गर्दछ। मैले यसलाई केहि दिनको लागि लिएँ, र मैले आफ्नो विसर्जन स्तरहरूमा कुनै उल्लेखनीय प्रगतिको आशा गरेन। यो उत्तम थियो किनकि यसले कुनै सुधारहरू अवलोकन गर्न कम्तिमा दुई चार दिनको आवश्यक पर्दछ। मैले सुधार गरेको फेला परेको एक हप्ता पछि सामान्य आधारमा अल्फा ब्रेन छनौट गरेर। म दिउँसो एकदम थकित महसुस गर्थें, र म दिनमा आराम गरेजस्तो महसुस पनि भएन।
थप रूपमा, म त्यो भयानक मलबे छैन! मैले दुईवटा क्याप्सुलहरूको सिफारिश गरिएको खुराक लिएँ। मैले पत्ता लगाए (कठिन तरिका) जुन अल्फा ब्रेन पिलहरू सँगै खानापूर्ति गरिएको थियो जुन हल्का वजनको थियो। जे भए पनि प्रकार्यहरू। व्यक्तिगत रूपमा, मैले कुनै अनावश्यक परिणामहरूको सामना गरेन। तर यदि तपाइँले कुनै पनि अनावश्यक प्रभावहरू देख्न सुरू गर्नुभयो भने अल्फा ब्रेन लिन रोक्नुहोस्। यो आईटम अन्य विचार पौष्टिक पूरकहरूको तुलनामा थोरै महँगो छ, यद्यपि सबैमा यो लागतको लागि राम्रो हो।
अल्फा मस्तिष्क घटक सूची
यदि अल्फा ब्रेनले तपाईंको लागि काम गर्दैन भने, वा तपाईं केवल केहि फरक गर्न प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, यहाँ केवल तीन अल्फा मस्तिष्क विकल्पहरू छन्।
- अल्फा- GPC
- बेकोपा मोनिएरा
- AC-11 (अनकारिया टोमेन्टोसा वा बिरालाको पंजा)
Alpha Brain को विकल्प
इंटेलिजन्ट ब्रेन अल्फा ब्रेन नूट्रोपिक्स पुरस्कार विजेता उत्पादनहरू हुन् जुन व्यक्तिको लागि मनोवैज्ञानिक फाइदाको चाहना राखिन्छ। विशेष गरी, तिनीहरूको पूर्ण फोकस ध्यान, शिक्षा, ऊर्जा, संज्ञानात्मक सुधार, कुल ऊर्जा, प्रशंसनीय तर्क, मेमोरी रिकल, समस्या समाधान र भावनात्मक प्रदर्शन लाई बढावा दिन्छ। यस आईटमलाई अक्सर "स्मार्ट गोली" वा "असीमित गोली" को रूपमा जानिन्छ अविश्वसनीय परिणाम र उद्योग-अग्रणी कार्यक्षमताका कारण।
न्यूरोफ्युएल बढ्दो ध्यान, गहिरा एकाग्रता, र बृद्धि स्मृतिको लागि उत्कृष्ट छ। शीर्ष प्राकृतिक अवयवहरू तपाईंको न्युरोट्रान्समिटरहरूलाई ईन्धनको रूपमा सञ्चालन गर्दछ, मस्तिष्क कोषहरू बीच उच्च सaling्केतको लागि मद्दत गर्दछ।
न्युरोफ्युएलले ध्यान केन्द्रित गर्दछ र दीर्घकालीन स्मृतिलाई शक्ति प्रदान गर्दछ तर न्यूरोट्रान्समिटर हेरफेरमा निर्भर छैन यो लाभ उठाउनको लागि। तर वस्तु एक उत्तेजक छैन र यो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो हर्मोनहरु लाई असर गर्दैन, अन्त परिणाम एकदम लामो दिगो र सूक्ष्म छ।
उमेर नभएको दिमागले तपाईको आफ्नै मेमोरीलाई बिस्तारै चार्ज गर्दछ, दिमागको कुहाइबाट बाहिर संघर्ष गर्दछ, तपाईलाई धारिलो बनाउँछ, तपाईको स्पष्टता बढाउँदछ, तपाईलाई समग्र राम्रो अनुभव गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र तपाईको दैनिक जीवनमा तनाव र चिन्ताको भावना कम गर्दछ।
आजकल त्यहाँ बजारमा दिमाग बढाउने उत्पादनहरू धेरै छन्। ओन्निटद्वारा अल्फा ब्रेन धेरै व्यक्ति मध्ये एक हो प्रयास गर्नुहोस्, र म यसलाई दृढताका साथ सुझाव दिन्छु। धैर्यवान हुनुहोस्, र तपाईंले खोजिरहनु भएको मस्तिष्क शक्ति फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ।